ओम्‍नी प्रकरणबारे बुझ्न स्वास्थ्य सचिव र विभागका महानिर्देशकलाई लेखाले बोलायो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चीनबाट खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन थालेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका सचिव लक्ष्मण अर्याल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमन सिंहलाई बोलाएको छ ।
ओम्नी बिजनेस प्रालिले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे छानबिन गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा सचिव र महानिर्देशकलाई समितिको सोमबारको बैठकमा बोलाइएको समिति सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धि कागजात मन्त्रालय र विभागबाट मगाएर अध्ययन गरेपछि दुवैलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो । ती कागजातबाट निस्केका निष्कर्ष समेटिएको संक्षिप्त प्रतिवेदन समितिमा रहेका सांसदहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ । त्यसपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई पनि बोलाइने तयारी भएको शाहले बताए ।
ओम्नीले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्री खरिदका कागजातको प्रारम्भिक अध्ययनबाट मन्त्रालय र विभागले ठेक्का दिने क्रममा प्रक्रिया नपुर्‍याएको पाइएको सभापति शाहले बताए । त्यस्तै, कानुनी अधिकार नभएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी दिइएको पाइएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारेका कागजात प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेपाली सेनासँग पनि मगाइएको सभापति शाहले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही कागजात बुझाएको र केही प्राप्त हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।
ओम्नीले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगमको विमान प्रयोग भएको र त्यसको भाडा कसले भुक्तानी गरेको भन्नेबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको शाहले बताए । तर, पर्यटनमन्त्रालयले त्यसको जवाफ नदिएको बताइएको छ ।
सुरुमा ओम्नीले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीबारे छानबिन हुने त्यसका लागि उपसमिति पनि गठन हुन सक्ने सभापति शाहले बताए ।
ओम्नी समूहको ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमार्फत सवा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी सरकारले नेपाल मगाएको थियो । सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको विमान नै पठाएर ती सामाग्री ग्वान्जाउबाट गत चैत १६ गते काठमाडौं ल्याएको थियो ।
सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीमा गगल्स, गाउन, जाँच गर्ने पञ्जा, सफाइमा प्रयोग हुने पञ्जा, एन–९५ मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता तथा अनुहार छोप्ने सामग्री, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, कोरोना परीक्षण गर्ने पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, संक्रमण परीक्षण किट, नमुना संकलन गर्ने ट्युबहरु रहेका थिए । ती सामग्री प्रचलित बजार मूल्यभन्दा अत्यन्तै महंगो मूल्य तिरेर ल्याएको पाइएको सार्वजिक लेखा समितिले जनाएको छ ।
ती सामग्री आएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने भनिएपनि सरकारले त्यस्तो कारबाही गरेन र उसले ल्याएका सामग्रीको गुणस्तरमा आशंका उत्पन्न हुँदा पनि सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि प्रयोगमा ल्याएको थियो ।
प्रकाशित : असार ७, २०७७ २१:३६
बेलायतमा आतंकवादी आक्रमणमा तीन मारिए
लन्डन — बेलायतको रेडिङस्थित एक पार्कमा गरिएको चक्कु आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीले उक्त घटना आतंकवादसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ ।
थेम्स भ्याली प्रहरीले हत्यामा संलग्न आरोपी एक जनालाई गिरफ्तार गरिएको जनाएको छ । गिरफ्तार हुने व्यक्ति २५ वर्षीय लिबियन नागरिक रहेको स्काई न्युजले उल्लेख गरेको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिले यसअघि पनि आपराधिक क्रियाकलापका कारण जेल सजाय भोगेका थिए । तर, त्यो आतंकवाद मुद्दा थिएन ।
मेट्रोपोलिटन पुलिस असिस्टेन्ट कमिसनर एवं प्रतिआतंकवाद प्रमुख नील बासुले घनालाई ‘अत्याचार’ भन्दै त्यसमा अरू व्यक्ति संलग्न नभएको जनाएका छन् । हालसम्म ४१ जना प्रत्यक्षदर्शी सम्पर्कमा आएको उनले बताए । मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान गर्न प्रहरी लागिरहेको बेलायती अखबारले उल्लेख गरेका छन् ।
रेडिङ टाउन सेन्टर नजिक फरबरी गार्डेन पार्कमा छिरेर एक व्यक्तिले अन्धाधुन्ध चक्कु प्रहार गर्दा तीन जना मारिएका छन् भने तीन घाइतेमध्ये दुई डिस्चार्ज भएर घर फर्किइसकेका छन् । गम्भीर घाइते एक जनाको रोयल बक्सायर अस्पतालमा उपचार जारी छ ।
थेम्स भ्याली पुलिस चिफ कन्सटेबल जोन क्याम्पबेलले घटना साँच्चिकै दु:खदायी र ‘दुर्लभ’ प्रकृतिको भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आइतबार आफ्नो कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा मन्त्री, सुरक्षा अधिकारी र प्रहरी अधिकृतहरूसँग भेटी घट्नाको अनुसन्धानबारे जानकारी लिएको बीबीसीले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री जोन्सनले घटनाको निन्दा गर्दै यसबाट पाठ सिकिने बताएका छन् ।
गृहमन्त्री प्रीति पटेलले पार्कमा रमाइरहेका मानिसहरूलाई आक्रमण गरिनु अर्थहीन भएको बताउँदै घटनाबाट आफू ‘अत्यन्तै चिन्तित’ भएको बताएकी छन् । घटना पार्कमै यसअघि भएको ‘ब्ल्याक लिभ्स म्याटर’ प्रदर्शनसँग भने सम्बन्धित नरहेको बताइएको छ ।
दर्जनौं सशस्त्र प्रहरीले शनिबार राति करिब ११ बजे रेडिङस्थित बेजिङस्टोक रोडका केही फ्ल्याटमा खानतलासीसमेत मारेका थिए । थेम्स भ्याली पुलिस फेडेरेसन अध्यक्ष क्रेग ओलेरीले घटनास्थल वरपर तत्काल गरिएको करिब डेढ घण्टा लामो कारबाहीले सम्भावित अन्य क्षति रोकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
घटनास्थल नेपाली समुदाय उल्लेख्य बसोबास गर्ने ठाउँ नजिक पर्छ । यसबाट नेपाली भने प्रभावित नभएको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
प्रकाशित : असार ७, २०७७ २१:१८